I-Compendium Iqalisa Ikhalenda Lokuhlela Ibhizinisi | Martech Zone
Uma uyibhizinisi elikhulu elinababhali abaningi, ukwenza konke okuqukethwe, isikhathi esinqunyiwe kanye nokuphakanyiswa kungaba inqubo enzima ukuphatha. Ukuhlanganiswa yethule i Ikhalenda lokuhlela isikhashana esedlule kepha uyithuthukise kakhulu ngezici ezithile zebhizinisi ezinhle:
Ukuhlanganiswa Kwemidiya Yezenhlalo - Konke ukukhushulwa kwakho kwemidiya yezenhlalo manje sekuboniswa ekhalendeni ukuze kubuyekezwe futhi kuhlelwe kalula. Uma kunomsindo omningi kakhulu, ungamane ufihle amaphromoshini nganoma yisiphi isikhathi.
Ukubonakala Kombhali - Bonke ababhali bakho manje sebekwazi ukufinyelela kukhalenda kanye nezindikimba zansuku zonke. Abakwazi ukwenza ushintsho noma ukuhlela kushejuli, kodwa sinethemba lokuthi lokhu kubonakala kuthuthukisa ukuxhumana kwecebo lokuhlela lilonke ngaphakathi kwethimba lakho.
Izindikimba Zansuku zonke - Khombisa ababhali bakho bese uhlela isu lakho lokuhlela ngokunikeza isihloko noma ingqikithi osukwini ngalunye. Izingqikithi zingasethwa ukuthi zenzeke nsuku zonke, masonto onke noma ngenyanga.
Hudula uphinde ubeke ukuhlela kabusha - Thola igebe ohlelweni lwakho lokuqukethwe? Hudula okuthunyelwe okungakahlelwa kusuka kubha eseceleni uye endaweni evulekile kukhalenda lakho. Ungahlela kabusha ukukhushulwa komphakathi, futhi.
Ikhalenda Export & Ukwabelana - Amakhalenda wakho kokubili okuthunyelwe nokukhushulwa komphakathi angathunyelwa futhi abelwe amakhalenda angaphandle afana ne-Google Calendar, iCal noma i-Outlook Calendar. Lawa ma-URL wokwabelana ngekhalenda anganikezwa nakwabasebenza nabo kanye nabasebenzi ngokubonakala okuthuthukile ekusebenzeni kwakho kokukhangisa kokuqukethwe.
Ukuhlunga nokwakhiwa okuthuthukisiwe - Senze intuthuko enkulu ekwakhiweni kwekhalenda, kufaka phakathi ukungezwa kwesimo sokuqukethwe kanye nezihlungi zenethiwekhi yokuxhumana nabantu. Ukuthola ukubuka konke okubonakalayo kohlelo lwakho lokuhlela akukaze kube lula kangako.
I-Compendium yipulatifomu yokumaketha yokuqukethwe esiza izinhlangano ukuthi zithathe futhi zenze okuqukethwe koqobo kuhabhu elinophawu lokusatshalaliswa kunoma isiphi isiteshi sokumaketha. Ukudalulwa: Nginamasheya ku-Compendium, ngasebenza lapho futhi ngisize ukuqala inkampani.